DEG-DEG: Korona Fayras Oo Saamayn Balaadhan Ku Yeelanaya Juventus & Xiddig Kale Oo Laga Helay Saacado Kaddib Cristiano Ronaldo - Gool24.Net
DEG-DEG: Korona Fayras Oo Saamayn Balaadhan Ku Yeelanaya Juventus & Xiddig Kale Oo Laga Helay Saacado Kaddib Cristiano Ronaldo
Xanuunka saamaynta badan dunida ku yeeshay sanadkan ee Korona Fayras ayaa u muuqda mid kasii balaadhanaya intii la filayay gaar ahaan xilligan ay xiddigaha kubadda cagta caalamku ku maqan yihiin gudashada waajibaadka qaramadooda.
Guud ahaan kooxaha Talyaaniga gaar ahaan kooxda difaacanaysa horyaalka Serie A ee Juventus ayaa ahayd mida dhibanaha ugu weyn usoo noqotay xanuunka maalmihii ugu dambeeyay.
Iyadoo 24 saacadood kahor baadhitaanada xanuunka lagaga helay Cristiano Ronaldo oo ah hoggaanka kooxdaas ayaa sidoo kale haatan laga helay da’yarka ree Maraykan ee Weston McKennie.
Xaalada caafimaad ee Weston McKennie ayay haatan Juventus warbixinta ay ku shaacinayso xanuunkiisa kasoo saartay iyadoo kooxdu sheegtay inuu fiidnimadan caawa galayo karantiin da’yarka ree Maraykan.
“Kooxda kubadda cagta ee Juventus waxa ay ku dhawaaqaysaa in iyadoo lagu jiro baadhitaanada hanaanka la marayo ciyaaryahan Weston McKennie laga helay Korona Fayras” ayaa lagu yidhi warbixinta ay Bianconeri soo saartay.
In xanuunkan laga helay McKennie ayaa dhibaato kale ku ah kooxdiisa Juventus maadaama uu yahay xiddigii labaad kaddib Ronaldo ee shaki la gelinayo haddiiba uu diyaar u noqon doono kulanka adag ee ay Barcelona Champions League kaga hortagayaan 28-ka bishan October.
Sharciga UEFA ayaa ah in ciyaaryahanka ka qayb qaadanaya kulan Yurub ah looga baahan yahay inuu xanuunka ka bogsado toddoba maalmood kahor kulankaas waana shuruud ay adagtahay inay buuxiyaan Ronaldo iyo McKennie.